Fantim-baovaon’ny herinandro faran’ny volana mey - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Kabarin’ny filoham-pirenena sy ny hamehana ara-pahasalamana
Notanterahina ny alin’ny alahady 30 mey tamin’ny 8 ora alina ny kabarin’ny filoham-pirenena, Andry Nirina Rajoelina, izay naharitra teo amin’ny 33 minitra. Tsy nisy mpanao gazety nametraka fanontaniana toy ny tamin’ny teo aloha fa avy dia ny jery todika fampitahana antontanisa tao anatin’ny roa volana nanaovana ny hamehana ara-pahasalamana no nentiny. Nilazany fa efa ho resintsika ny aretina, mihena ny miditra hopitaly, mitombo ny sitrana ary mihamihena koa ny isan’ny lavo. Fa mbola tohizina ny hamehana ara-pahasalamana mandritra ny 15 andro sy ny fepetra miaraka amin’izany. Anisan’ny nambarany ny tsy fisian’ny faritra mikatona intsony, ny fanafoanana ny fihibohana tanteraka isaky ny sabotsy sy alahady ao Analamanga, ny fisokafan’ny fitaterana an-tanety manomboka amin’ny 4 jona ary ny fisokafan’ny sekoly manomboka ny 2 jona 2021. Nasiany tsidi-dresaka ihany koa ny hanaovana ny vaksiny tsy asiam-panavahana sokajin’olona, izay tsy an-tery. Maro ireo niandry ny ambaran’ny filoha momba ny fanamaivanana ny olana sosialy iainan’ny olona sy ny fiatrehana ny fiainam-pihariana, saingy tsy nisy izany.
Tamin’ny 31 mey, araka ny antontanisa ofisialy momba ny covid-19, dia 24 ny tranga vaovao tamin’ny fitiliana 202, miisa 2 no lavo ka 841 no fitambaran’izany hatramin’ny 23 marsa 2020, miisa 142 ny an-dalam-pitsaboana izay tranga misy fahasarotana daholo, miisa 41 366 ireo voatily fa mitondra ny tsimokaretina ka ny 40 491 no sitrana.
Herisetran’ny mpitandro filaminana tamin’ny mpivarotra sy mpanao gazety
Araka ny tati-baovao nampitain’ny haino aman-jery samihafa tamin’ny sabotsy 29 mey, dia niharan’ny herisetran’ny mpitandro ny filaminana ny mpivarotra legioma sy anana tamin’ny tsena sasany tao Antananarivo. Hita izany teny Andranonahaotra Itaosy sy Ankadindramamy satria hoe voarara izany ho azy ireo. Baiko no notanterahin-dry zareo raha ny nambara. Nilaza anefa ny tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Polisim-pirenena fa tsy avy amin’izy ireo izany. Torak’izany koa ny nambaran’ny praiminisitra izay nilaza fa hanao fanadihadiana. Mpanao gazety avy amin’ny sehatra tsy miankina kosa no niharan’ny fandrahonana tsy nahazo naka sary teny Ankadindramamy ary nasaina nofafana ny sary nalaina.
Fanovan-dalàna momba ny satan’ny mpanohitra
Nolanian’ny teo anivon’ny antenimiera roa tonta ny fanovana ny lalàna momba ny satan’ny mpanohitra izay tsy maintsy depiote eo anivon’ny Antenimieram-pirenena no ho amin’ny toerana. Manova ilay lalàna tamin’ny tetezamita laharana 2011-013 nosoniavin’ny filoha Andry Rajoelina, izay namaritra izany ho an’ny filohan’ny antoko nahazo vato be indrindra tamin’ny fifidianana filoham-pirenena.
Talen’ny ACM nogadraina dia navoaka fotoana fohy momba ny raharaha volamena 73,5 kg
Nampidirina am-ponja tamin’ny alakamisy 27 mey ny tale jeneralin’ny ACM. Izy dia voarohirohy momba ilay raharaha volamena 73,5kg naondrana antsokosoko nahavoasambotra olona telo avy aty Madagasikara tany Afrika Atsimo tamin’ny fiandohan’ity taona ity. Navoaka vonjy maika izy mba hanao famindram-pahefana tamin’ny solony fa naverina am-ponja ihany avy eo. Tsy mbola mazava hatramin’izao ny momba ity raharaha ity.
Nisy ny hetsi-pitokonana nataon’ireo mpandraharan’ny oniversite tamin’iny herinandro iny ho fitakiana ny karaman’izy ireo tsy naloa. Nanomboka izany ny tany Fianarantsoa.
Andro maneran-tany ho an’ny fifandraisan’ny mpiara-belona sy vavaka totoafo
Teo anivon’ny Fiangonana katolika eto Madagasikara, dia nanamarika ny andro maneran-tany ho an’ny fifandraisan’ny mpiara-belona faha 55, tamin’ny alahadin’ny Trinite Masina 30 mey. Isaky ny Alahady manaraka ny fanamarihana ny andro Fiakarana no anamarihan’ny eran-tany izany, dia ny 16 mey tamin’ity. Noho ny mbola fikatonan’ny fiangonana dia tamin’ny alalan’ny haino aman-jery no nifampizarana ny momba izany tamin’ny alalan’ny vavaka sy fandinihana ny hafatry ny Papa Fransoa momba izany. Hafatra navoakany tamin’ny 23 janoary 2021, andro iray mialoha ny fetin’i Md François de Sales, mpiaro ny mpanao gazety. Lohahevitra tamin’ity ny hoe “Avia, ary zahao” (Jn 1,46). Iresahan’ny papa momba ny andraikitry ny mpampiasa ny fitaovan-tserasera samihafa amin’ny fizahana ny zava-misy eny ifotony iainan’ny olona itadiavana ny marina. Navohitrany ihany koa ny amin’ny lafy tsara sy lafy ratsin’ny fampiasana ny teknolojia. Ao anatiny ny internety izay ilam-pahamalinana mba tsy hibirioka amin’ny ratsy na hampiasaina amin’ny familiviliana ny marina. Mgr Fulgence Rabemahafaly, filohan’ny Vaomieran’ny eveka momba ny Fifandraisan’ny mpiara-belona, tao amin’ny RDB, dia nitondra famelabelarana momba izany tamin’io andro io.
Nifarana tamin’ny 31 mey teo ihany koa ny vavaka totoafo nanentanan’ny papa Fransoa enti-miatrika ny handresena ity aretina covid 19 maneran-tany ity, tamin’ny alalan’ny vavaka Rozery.
Momba ny resaka fiangonana ihany, dia nambaran’ny filoham-pirenena fa misokatra ny fiangonana ary ferana ho roa isaky ny dabilio ny olona amin’izany. Fepetra hafahafa raha ny fanehoan-kevitry ny olona maro.